Nant Thin Thin Hmwe's Page - Myanmar Network
Nant Thin Thin Hmwe
Nant Thin Thin Hmwe's Likes
Nant Thin Thin Hmwe's Friends
Nant Thin Thin Hmwe's Discussions
Started Jul 11, 20190Replies5Likes
ကျွန်မရဲ့ ဘဝရထား ဆိုက်ရောက်ရာ သြစတျေးလျ နိုင်ငံမှာ နေထိုင်စဉ်၊ သွားလာလည်ပတ်ခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ပြန်လည်မျှဝေ ရေးသားချင်ပါတယ်။ ခရီးသွား ဝါသနာပါသူ၊ ဝန်ဆောင်မှုကို သုံးစွဲသူ ဖောက်သယ်တစ်ဦးရဲ့…Continue
Started Oct 25, 20140Replies4Likes
ငယ်ငယ်က မောင်ဖေငယ်လို အချစ်မျိူး ဆိုတဲ့သီချင်းကို နားရည်ဝခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒိုင်းခင်ခင်ရဲ့ ဘ၀ရာဇ၀င် ဇာတ်လမ်းကို ကျွန်မ စိတ်မ၀င်စားခဲ့ပါ။ ဆရာမ စိမ့်(ပညာရေး) ရဲ့ ဒိုင်းခင်ခင် ၀တ္ထုကို ဖတ်လိုက်ရတော့…Continue
သွားပါများ ခရီးရောက်ဆိုသလို နိုင်ငံအနှံ့ကို ကျွန်မ မရောက်ပေမဲ့ မလေးရှားရောက် မြန်မာမိန်းကလေးတစ်ယောက် ကွာလာလမ်ပူမှာ ကျက်စားနေထိုင်ရင်း တွေ့ရတာတွေကို စမြုံ့ပြန်ပြောပြချင် ပါတယ်။ ရောက်တဲ့အရပ်မှာ ကျွန်မ…Continue
Started this discussion. Last reply by May Nann Feb 28, 2014.3Replies 16 Likes
နှစ်တွေအတော်ကြာအောင် ပြန်မရောက်ခဲ့သော မြို့လေးထဲ တစ်ခေါက်ပြန်ရောက်ခဲ့လေပြီ။ မြို့လေးက အရင်လို နွေးနွေးထွေးထွေး မရှိတော့သလို။ ပူပြင်းခြောက်သွေ့သော နွေရာသီနှင့် လိုက်ဖက်အောင် မြို့လေးက သွေ့ခြောက်…Continue
Nant Thin Thin Hmwe has not received any gifts yet
Nant Thin Thin Hmwe's Page
စံပယ်ဖြူ နံမည်နဲ့ http://sabephyu.blogspot.com မှာရေးပါတယ်။
At 16:18 on January 14, 2020,
At 13:48 on July 25, 2019,
At 18:10 on October 30, 2013, soe wai maung said…
Sis How are you ?
At 17:55 on March 18, 2013, Nan Thi Thi Win Than said…
I was really nice to know you.Try your best and don't be downcast.Our life is our experiences.
At 11:51 on February 19, 2013, Wai Phyo Thu said…
thank you,sis......u are cute too !! :)
thanks too for ur accpet,sister !
At 19:39 on December 31, 2012,
At 18:58 on November 22, 2012, saw gerald said…
At 9:12 on September 28, 2012,
Star MemberKo Ki said…
စာတွေကို ဖတ်ရှုအားပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။ တစ်နယ်တကျေးမှာ တွေ့ကြုံခဲ့ စဉ်းစားမိခဲ့ ခံစားမိခဲ့တာတွေကို မမေ့မပျောက်ခင် မှတ်တမ်းတင်ကျင့်ရှိအောင် ကြိုးစားဖို့ အားပေးချင်ပါတယ်..။
At 14:19 on September 22, 2012, April Flame said…
At 14:43 on July 12, 2011, mgtharmyar said…
How do you do? How things go on? I advise you that you should never forget your native and come and see frequently.